अन्ततः रिलिज भयो ए मेरो हजुर–३ को फस्ट गीत, आइसलेकमा देखियो अनमोल र सुहानाको रोमान्स, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अन्ततः रिलिज भयो ए मेरो हजुर–३ को फस्ट गीत, आइसलेकमा देखियो अनमोल र सुहानाको रोमान्स
आउँदै गरेको चैत्र २९ गते प्रदर्शन हुने चलचित्र ए मेरो हजुर–३ को पहिलो गीत अन्ततः सार्वजनिक भएको छ । केही समय अघि नै गीत रिलिजको घोषणा गरिएको थियो तर केही कारण बस गीत रिलिज हुन सकिरहेको थिएन भने अहिले आएर रिलिज गरिएको छ ।
‘तिमी बिनाको जिन्दगी, म जिन्दगीनै भन्दिनँ बोलको गीत रिलिज गरिएको हो भने गीतमा अनमोल केसी र सुहाना थापाको रोमान्टिक अवतार देख्न सकिन्छ । नेपालको हिमाली भेग र अमेरिकामा खिचिएको ५ मिनेट ४६ सेकेण्ड लामो भिडियो आकर्षक बनेको छ ।
झरना थापाको निर्देशन तथा सुनिल कुमार थापाको निर्माणमा बनेको यही चलचित्रबाट सुहाना थापालाई डेब्यु गराइएको हो । उनि सुनिल–झरनाकी सुपुत्री समेत हुन् ।
सार्वजनिक गीतमा गायक सुगम पोखरेल र प्रविशा पोखरेलले स्वर दिएका छन् भने एकनारायण भण्डारीको लेखन रहेको छ । गीतमा आशिष अविरलको संगीत रहेको छ ।
झरना थापा र सुमन पौडेलले लेखेको चलचित्रमा अनमोल र सुहानाबाहेक अर्पण थापा, सलोन बस्नेत, रविन्द्र झा, रुपा घिसिङ, रक्षा गौतम, विशाल पहाडी, सरोज खनाल लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
हेर्नुस् गीतको भिडियो :